Lumbini Online | » ‘नेकपा बिचारबाट विचलित भयो : सरकार जनतासंग टाढा’ ‘नेकपा बिचारबाट विचलित भयो : सरकार जनतासंग टाढा’ – Lumbini Online
‘नेकपा बिचारबाट विचलित भयो : सरकार जनतासंग टाढा’
Lumbini Online August 21, 2020
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा पार्टीको बिचार र सिद्धान्तबाट नेताहरु विचलित भएको र नेता कार्यकताहरुलाई काखापाखाको व्यबहार भएको भन्दै पार्टी परित्याग गरेका बुटवल नगर कमिटीका सचिवालय सदस्य बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ निवासी जीतबहादुर मल्ल हालै नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छ । उहाँ नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गर्दै गर्दा नेकपाले पार्टीको नीति विपरित काम गरेको, सिद्धान्त नमानेको र विपक्षीसंग साँठगाँठ गरेको आरोप सहित मल्ललाई पार्टीबाट कारवाही गरेको विज्ञप्ती जारी गर्यो । तत्कालिन नेकपा नेता हाल नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेका मल्ल आधा दर्जन संघसंस्थामा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेकाले त्यस वडामा मात्रै नभएर संघीय तथा प्रदेशको निर्वाचनमा पनि राम्रै प्रभाव पार्ने व्यक्तिको रुपमा लिईन्छ । प्रगतिनगर सामुदायिक बिद्युत सहकारी संस्थाको अध्यक्ष, सामुदायिक बिद्युत महासंघ प्रदेश पाँचको सचिव, प्रगतिनगर खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाको अध्यक्ष, जिल्ला खानेपानी महासंघ रुपन्देहीको सल्लाहकार, प्रगति माबि बुटवल ११ को प्रमुख सल्लाहकार, चम्किलो कृषि सहकारी देवीनगरको अध्यक्ष तथा प्रगति नगरको समस्या तथा बिकासमा काम गर्ने प्रगतिनगर अभिभावक मञ्चको अध्यक्ष रहेका मल्लले नेकपा छाड्दा नकपालाई राम्रै धक्का लागेको छ भने हुल सहित नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गर्दा नेपाली काँग्रेस उत्साहित भएको छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर मल्लसंग गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप ।
तपाई नेकपामा राम्रै जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनु भएको थियो । पार्टी सत्तामा छ, सत्तासिन दल किन छोड्नु पर्यो ?
पार्टीमा एक खालको केही न केही फरक खालको अनुभूतिहरु हुन थाल्यो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्र जुन पूर्व एमाले र पूर्व एमाओवादी एकता भएर आयो, त्यसपछि कम्युनिष्ट पार्टीका नेतामा पार्टीको बिचार र शिद्धान्तमा विचलन सुरु भयो । र तीनै तहमा दुई तिहाई बहुमत सरकारको कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको छ तर कुनैपनि जनतालाई एक खालको सेवा सुविधाको बिषयमा महसुस हुन सकेन । पार्टी बिचारबाट विचलित भयो र सरकार जनताबाट टाढा भएको देखियो । जनतालाई के कुराको समस्या छ भन्ने कुरा यो सरकारले बुझ्ने प्रयास सम्म गरेन । यो एक खालको नारामा मात्रै सिमित भयो र अव यो पार्टीमा बस्न उचित छैन भन्ने मलाई लाग्यो । हसिया हथौडा भनेको सर्वहाराको प्रतिक हो, त्यो प्रतिकको वेईज्यत भयो भन्ने मैले ठाने । अब नेपालमा कम्युनिष्ट रहेन भन्ने मेरो बुझाईले गर्दा साथीहरुमा यो कुरा राखेर पार्टी परित्याग गर्ने निर्णय गरेको हुँ ।
तपाई नेकपा परित्याग गर्नासाथै नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश पनि गर्नुभयो । पार्टी त अरु पनि थिए, किन नेपाली काँग्रेसलाई नै रोज्नुभयो ?
देशलाई हाँक्ने भनेको अहिलेको परिवेशमा कम्युनिष्ट या काँग्रेस नै हो । अरु साना पार्टी दलमा मात्रै सिमित छन् । र पार्टी बिचारबाट चलिरहेको भन्ने यो नेकपा कम्युनिष्ट बिचारबाट विचलित भयो । तर नेपाली काँग्रेस आफ्नो राष्ट्रियता लोकतन्त्र र समाजवादको लक्ष्यलाई आदर्श मानेर अहिलेसम्म आईरहेको छ । त्यसो भएको हुँदा देशमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बिचार या सिद्धान्तमा होस या व्यबहारिक रुपमा होस नेपाली काँग्रेस नै हो भन्ने हामीलाई लाग्यो । र नेपाली काँग्रेसमा जोडिनु पर्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगेर नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरिएको हो ।
नेकपा छोडेर काँग्रेसमा प्रवेश गर्दैगर्दा तपाईलाई नेकपामा पार्टीको सिद्धान्त बिपरित काम गरेको, नीति नमानेको, विपक्षीसंग साँठगाँठ गरेको भन्ने आरोप छ नी ?
त्यो आरोपमा कुनै पनि सत्यता छैन । पार्टी छोडेपछि आरोप लगाउनु उनीहरुको धर्म हो । आफैले पार्टीलाई ठिकसंग सञ्चालन गर्न नसक्ने, आफ्ना कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्न नसक्ने, पार्टीका कार्यकर्तालाई भाईबन्दु गर्ने, हेलाहोचो गर्ने, पार्टी पद्धतीबाट बाहिर जाने अनी अरुलाई पार्टी छोड्यो भनेर निराधार आरोप लगाउने काम भएको छ । यो नेपाली काँग्रेसंग गयो भनेर यावत झुठा आरोप लगाएर पार्टीबाट कारवाही गरेको भन्दै एकखालको विज्ञप्ती निकालेका रहेछन् । तर त्यो विज्ञप्ती पनि पार्टी प्रवेश भईसकेपछि नेपाली काँग्रेसको पार्टी सदस्यलाई विज्ञप्ती निकालेर कुनै अर्थ रहेन । मैले २०७४ सालदेखि नै लिखित रुपमा र मौखिक रुपमा समेत नेतृत्वलाई र पार्टी कमिटीमा हरेक कुराहरु राखेको थिएँ । त्यो सुनुवाई भएन । पार्टीमा नेता कार्यकर्तालाई काखापाखा गर्ने काम भयो । अहिले मलाई जे आरोप लगाईएको छ त्यो सबै झुठा र निराधार निराधार छन् । त्यहाँ अरु कुराहरु पनि पत्रिकामा आएको छ भन्ने साथीहरुले सुनाएका छन् । त्यो पनि निराधार छ । मैले खोलाको बिषयमा कहिल्यै पनि खोलामा टेक्दिन, सार्वजनिक जग्गाको विषयमा पनि म पहिल्यैदेखि संरक्षण गर्ने पक्षमा हो । कुनै पनि सार्वजनिक जग्गा हडपेको पनि छैन । काँग्रेसमा प्रवेश गर्यो भनेपछि मेरो चरित्र हत्या गर्नलाई झुट्टा र निराधार आरोप लगाएका हुन् ।
तपाई काँग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो । काँग्रेसमा पनि गुटउपगुटका चर्चा धेरै नै छ । अब कसरी अंगाडी बढ्नुहुन्छ ?
नेकपामा पनि गुटबन्दी थियो र यहि गुटबन्दी मलाई मन नपरेको हो । गुटबन्दी पार्टी पद्धती भन्दा बाहिर गयो भने, पार्टी पद्धतीभन्दा बाहिरबाट पार्टी सञ्चालन हुन थाल्यो भने त्यसलाई गुटबन्दी भनिन्छ । नेकपामा ठिक त्यही भएको हो । तर नेपाली काँग्रेसमा पार्टीको बिधान तथा सिद्धान्त भन्दा बाहिरबाट पार्टी सञ्चालन भएको छ जस्तो लागेको छैन । पार्टीमा गुटहरु हुनु स्वभाविकै हो, त्यसको पनि हद हुन्छ । म स्वभाविक रुपमा पार्टी पद्धती अनुसार पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ । म यही मान्यतालाई आत्मसात गरेर नै नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेको छु । म कुनै पनि गुटमा लाग्दिन । पार्टी पद्धतीलाई नै शिरोभर मानेर, पार्टी बिधानलाई शिरोभर मानेर मैले काम गर्नेछु । र हाम्रो नेपाली काँग्रेसमा पार्टी भित्र सबै नेता कार्यकर्तालाई भन्ने छु, कुनै गुटगत रुपमा नभएर विधानत रुपमा अंगाडी बढ्नुपर्छ ।
तपाई सहित कति जना नेकपाबाट नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको हो ?
अहिले हामी बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नं. ११ बाट मात्रै १२२ जना संगठित सदस्य र ९६ जना पर्टी सदस्य नेकपा छोडेर काँग्रेसमा प्रवेश गरेका छौं । यो लहर सुरु भएको छ । यसमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले घेराबन्दी गर्ने, नानाबिखन्ना भ्रम फैलाउने गरिरहुनु भएको छ । त्यो उहाँहरुको धर्म हो । हामीले बुटवलबाट सन्देशमात्रै दिएका हौं । नेकपाबाट नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गर्ने ढोका मात्रै खोलेका हौं । यो ढोकाबाट कम्युनिष्टका धेरै साथीहरु नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गर्नुहुनेछ ।